Inta badan wadooyinka Muqdisho oo maanta xiran. – Hornafrik Media Network
Inta badan wadooyinka Muqdisho oo maanta xiran.
By HornAfrik	 On Apr 4, 2018
Hornafrik-Ciidamada ammaanka Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa xalay saq dhexe waxa ay xireen wadooyinka waa weyn ee magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, maadaama maanta lagu balansan yahay kulanka Baarlamaanka oo xiisad siyaasadeed wata.
Kulanka Baarlamaanka ayaa saakay lagu balansan yahay xarunta Golaha Shacabka 09:00 subaxnimo, waxaana looga hadlayaa laba Ajande oo kala duwan, kuwaasi oo kala ah Mooshinka Jawaari iyo arrinta xuduuda ee Soomaaliya & Kenya, iyada oo laga cabsi qabo in ay dhacaan falal ka baxsan amniga.
Xildhibaano ka tirsan Golaha Shacabka oo aroor hore gaaray xarunta.
qaar kamid ah wariyaasha Xarunta Golaha shacabka u tagay in ay wararka maanta soo tabiyaan oo la xiray.